2017 ဇန်နဝါရီလတွင် Netflix တွင်အသစ်: ကံဆိုးသောဖြစ်ရပ်များ၊ စီးရီးများ - Netflix သတင်း
ဒါဟာ Philadelphia တွင်ရာသီ 11 ခုနှစ်တွင်အမြဲတမ်းနေသာရဲ့အပါအဝင်ဇန်နဝါရီလ 2017 ခုနှစ်တွင် Netflix ကအပေါ်အသစ်ကဘာလဲ
အကြွေး - ဂရုမစိုက်သောပွဲများ - ဂျိုး Lederer / Netflix
Netflix 2016 တွင်အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်: ငါ Am Santa Claus ဖြစ်သည် အဘယ်အရာကို The Fast နှင့် The Furious အပါအဝင်ဇန်နဝါရီလ 2017 ခုနှစ်တွင် Netflix ကထွက်ခွာမယ့်
ဒါဟာ Philadelphia တွင်ရာသီ 11, ကံဆိုးဖြစ်ရပ်များရာသီ 1 ၏တစ် ဦး ကစီးရီးနှင့်ဤမျှလောက်ပိုပြီးအပါအဝင်ဇန်နဝါရီလ 2017 ခုနှစ်တွင် Netflix ကအပေါ်အသစ်ရဲ့အဘယ်အရာကိုအပြည့်အဝစာရင်း!
ကြာသပတေးနေ့တွင်, Netflix ကဇန်နဝါရီလ 2017 ခုနှစ်တွင် Netflix ကအပေါ်အသစ်ရဲ့အဘယ်အရာကိုများ၏စာရင်းအပြည့်အစုံကြေညာခဲ့သည်! လာမည့်လတွင် streaming ၀ န်ဆောင်မှုကို ၀ င်ရောက်ရန်တီဗွီအစီအစဉ်များနှင့်ရုပ်ရှင်များစွာရှိသည် ဒါဟာ Philadelphia တွင်ရာသီအမြဲတမ်းနေသာပါပဲ ဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့တွင် 11 နှင့် ကံဆိုးပွဲများတစ်စီးရီး ဇန်နဝါရီလ 13 ရက်နေ့ရာသီ 1 ။
beale လမ်းပေါ် Netflix စကားပြောရန်နိုင်လျှင်
သိသာထင်ရှားတဲ့ ကံဆိုးပွဲများတစ်စီးရီး Season 1 သည်လာမည့်လတွင် Netflix ၏အကြီးမားဆုံးဖြန့်ချိမှုဖြစ်သည်။ သို့သော်ဇန်န ၀ ါရီလက Netflix ကိုလာမည့်ပြပွဲအသစ်များနှင့်ရာသီသစ်များပြသထားပါသည်။ မင်းသမီး ရာသီ 2, Degrassi: နောက်တန်း ရာသီ ၃၊ Tarzan နှင့် Jane, လက်တွေ့, နှင့် နယ်စပ် Jason Momoa ပါဝင်သရုပ်ဆောင်မည့်အစီအစဉ်ကိုလည်းလာမည့်လတွင် streaming ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ထုတ်လွှင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
တီဗီဘက်မှာ ဒါဟာ Philadelphia တွင်အမြဲတမ်းနေသာပါပဲ Season 11 သည်လာမည့်လတွင်ထုတ်ဝေမည့်အကြီးမားဆုံးအမည်ဖြစ်သော်လည်းအချို့ပျော်မွေ့ကြလိမ့်မည် Bates မိုတယ် ရာသီ ၄ ။
ရုပ်ရှင်အတွက် E.T. အဆိုပါအပို - မြေပြင် နှင့်အတူနှစ်လကွာပြီးနောက် streaming သို့ပြန်သွားသည် Braveheart Boogie Nights, နှင့် Caddyshack ။
နောက်လတွင် Netflix တွင်ပြသမည့်နောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ရှင်မှာ Disney ၏ဖြစ်သည် Looking Glass မှတဆင့် Alice Tim Burton မှရိုက်ကူးပြီး Johnny Depp သရုပ်ဆောင်သည်။ အဆိုပါရုပ်ရှင်သည် streaming ၀ န်ဆောင်မှုတွင်နောက်ဆုံးဖြန့်ချိမည့် Disney ရုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။
Netflix မှတစ်ဆင့် ၂၀၁၇ ဇန်န ၀ ါရီလတွင် Netflix သို့လာမည့်တီဗွီအစီအစဉ်များနှင့်ရုပ်ရှင်အသစ်များ၏စာရင်းအပြည့်အစုံကိုကြည့်ပါ။
ပိုများသော netflix:Netflix တွင်အကောင်းဆုံးခရစ်စမတ်ရုပ်ရှင်
ရက်ပေါင်း ၈၀ အတွင်းကမ္ဘာအနှံ့အပြားတွင် (၂၀၀၄)
After Innocence (၂၀၀၅)
Bee Movie (၂၀၀၇)
E.T. မြေပြင်ပြင် (၁၉၈၂)
HALO ဒဏ္endsာရီများ (၂၀၀၉)
Justin Bieber: ဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ (2011)
Ocean's Twelve (၂၀၀၄)
ရီးရဲလ်စုံထောက်: ရာသီ 1 (2016)
Superman Returns (၂၀၀၆)
စူပါမင်း III (1983)
Superman IV: ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရှာဖွေခြင်း (၁၉၈၇)
Superman: The Movie (၁၉၇၈)
The Shining (၁၉၈၀)
The Rat Race (၂၀၁၂)
Vendetta အတွက် V (၂၀၀၅)
Vanilla Sky (၂၀၀၁)
Philadelphia တွင်အမြဲတမ်းနေသာသည်။ ရာသီ ၁၁ (၂၀၁၆)
Jen Kirkman: Livin ကိုသာထိန်းထားပါ။ - NETFLIX မူရင်း
ဒင်္ဂါးပြား Heist- NETFLIX မူရင်း
Degrassi: နောက်တန်း - ရာသီ ၃ - NETFLIX ORIGINAL
ကြီးထွားလာ Coy (2016)
ပလပ်စတစ်ပင်လယ် - ရာသီ ၁
တစ်ကြိမ်တွင်တစ်ရက် - ရာသီ ၁ - NETFLIX ORIGINAL
Tarzan နှင့် Jane: ရာသီ ၁- NETFLIX ORIGINAL
အာလဖနှင့်အိုမီဂါ7(2016)
Ratchet နှင့် Clank (2016)
အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းများ - ရာသီ2(၂၀၁၆)
ဂျင်မ် Gaffigan: Cinco- NETFLIX ORIGINAL
ကျနော်တို့ Lalaloopsy နေ: ရာသီ 1- NETFLIX ORIGINAL
Looking Glass မှတဆင့် Disney's Alice (၂၀၁၆)
ကံမကောင်းစွာဖြစ်ရပ်များတစ်စီးရီး: ရာသီ 1- NETFLIX ORIGINAL
Casablancas - မိန်းမများကိုချစ်သောသူ
Clinical- NETFLIX မူရင်း
Clan ပုံပြင်: ရာသီ 1 - NETFLIX ORIGINAL
အဆိုပါစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး: တစ် ဦး ကဗြိတိန်ရာဇဝတ်မှုပုံပြင်: ရာသီ 1- NETFLIX ORIGINAL
Camp X-Ray (၂၀၁၄)
ကတ်ထူပြား Boxer (2016)
သံမဏိ၏ Lady: ရာသီ3(2016)
လိမ်စည်, Big Fat Body (2015)
စစ်အတွင်းပုံတူများ - ရာသီ ၁ (၂၀၁၄)
Flash of Genius (၂၀၀၈)
Neal Brennan: ၃ Mics- NETFLIX ORIGINAL
ရော်ဂျာ Corman ရဲ့သေဆုံးမှု 2050 (2016)
Frontier - ရာသီ ၁– NETFLIX ORIGINAL
10- NETFLIX ORIGINAL ကိုယူပါ
Voltron: ဒဏ္Defာရီနောက်ခံလူ: ရာသီ 2- NETFLIX ORIGINAL
Bates Motel: ရာသီ ၄ (၂၀၁၆)
ဂရမ်မီ၏ဆပ်ကပ်ပြပွဲ - ရာသီ2(2016)
Cristela Alonzo: အောက်ပိုင်း Classy– NETFLIX ORIGINAL
Gad Gone Wild- NETFLIX မူရင်း
Hieronymus Bosch - စာတန်၏ထိတွေ့မှု (၂၀၁၀၆၀)
စစ်ဌာနချုပ် Kill (2016)
Terrace House: Aloha ပြည်နယ်: ရာသီ ၁: အပိုင်း ၁– NETFLIX ORIGINAL
မူလစာမျက်နှာ: သိကောင်းစရာ & Oh နှင့်အတူ Adventures: ရာသီ 2- NETFLIX ORIGINAL
iBOY– NETFLIX မူလ
Kazoops !: ရာသီ ၂ - NETFLIX ORIGINAL
အမှန်တရား Shadows of (2016)
Sharknado: ၄ ကြိမ်မြောက်နိုးကြားမှု (၂၀၁၆)
Ripper လမ်း: ရာသီ 4
Swing State (၂၀၁၆)
Bill Burr မတ်တတ်ရပ်ပါ - NETFLIX ORIGINAL
Rick နှင့် morty ရာသီ4ဇာတ်လမ်းတွဲ2အပြည့်အဝနာရီ
လော်ရာ prepon လိမ္မော်သစ်ရာသီအနက်ရောင်6ဖြစ်ပါတယ်
အဆိုပါမွေးမြူရေးခြံများ၏အပိုင်း6ကိုထုတ်လာပါဘူးသည့်အခါ
ဘယ်အချိန်မှာတောင်ဘက် Premiere ၏မိဖုရားပါဘူး
izombie ရာသီ3ထွက်လာမယ့်အခါ